Digirta cagaaran | November 2019
Sida loo isticmaalo daroogada "Baykoks": qiyaasta iyo habka maamulka
Editor Ee Doorashada November 22,2019
Ugu Weyn Ee Digirta cagaaran
Digirta: noocyada iyo noocyada
Digirta ayaa had iyo jeer loo tixgeliyaa aalado yar yar iyo kalsooni leh digitible, taas oo ah il heer sare ah oo tamar ah, tani waa run loogu talagalay noocyo farabadan (tani waxaa lagu tilmaamay sharaxaadda). Si kastaba ha ahaatee, tani had iyo jeer ma aha kiiska, iyo marxaladaha hore ee beerashada dhaqanka, geedka waxaa loo isticmaalaa sida qurxinta qurxinta.
Waxa la cuno iyo waxa la quudiyo bakaylaha xilliga jiilaalka
Waa maxay khatarta ka jirta Toonta Shiinaha? Guryaha iyo sharaxaadda badeecadda la soo dhoofiyo
Black Acacia - calaamad u ah dhimashada
Recipe of diyaarinta iyo sifooyinka daawooyinka casiir viburnum ah
Tilmaamaha gaarka ah ee daryeelka guriga ee pediilanthus
Gerberas - dhirta dhalaalaya, oo la mid ah ubax leh chamomile. Maahan munaasab ah in magacooda labaad ay yihiin Transvaal Daisy. Gerberas waxaa lagu koray beeraha iyo aqallada lagu koriyo si loo gooyo iyo bouquets, laakiin waxaad ku bilaabi kartaa ubaxkan guriga. Si dhirta loo dhigo, waa lagama maarmaan in la raaco xeerarka fudud ee daryeelka guriga. Read More
Shirka Caalamiga ah ee Shirweynaha Bariga Dhexe ee Bariga Dhexe ayaa ka bilowday Dubai
Sida loo hagaajiyo difaacida bakaylaha
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Digirta cagaaran 2019